Indawo yeHolide "Auszeit"-ipholile kakhulu kwaye iyindawo entle
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguSilvia
Indlu yeeholide ikulindele kwindawo entle yaseLauterbach (isithili saseRosenheim) kwiinduli ezinqabileyo zaseBavaria.
Iinkcukacha ezingaphezulu zinokufunyanwa phantsi kweNkcazo.
Ukufikelela kwi-85 sqm yendlu ngendlu yokungena eyahlukileyo.
Yindlu epholileyo kakhulu, efakwe luthando oluninzi, ebonelela ngoyilo oluhle kwaye yenza ukuba kuhlale okona kulungileyo, ngakumbi kwiintsapho. Ikhitshi evulekileyo kwindawo yokuhlala, igumbi lokulala elipholileyo kunye negumbi labantwana elijikeleze yonke into. Igumbi labantwana linokusekwa njengegumbi lokulala lomntu omdala okanye njengeofisi. Sazise nje xa ubhukisha okanye ubuncinci iintsuku ezi-5 ngaphambi kokufika. Ibalcony entle ikumema ukuba uyonwabele iti okanye ikofu yakho emoyeni omtsha ngombono wentaba. Iindawo zokupaka ziyafumaneka kwipropathi. Ilinen yebhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso.
-Igumbi lokulala eli-1 elivaliweyo elinebhedi (ezi zinokudityaniswa ngokulula okanye zityhalwe ngokwahlukeneyo zenze iibhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga)
- Igumbi lokulala eli-1 elongezelelweyo elivaliweyo elinebhedi enkulu yabantwana OKANYE ibhedi yomntu omdala onendawo yokusebenza
- 1 ibhedi yesofa kwindawo yokuhlala
-Ikhitshi enomenzi wekofu, iketile, itoaster kunye
umenzi weEspresso (izitya, iimbiza, njl. njl.)
-I-balcony encinci kodwa intle enetafile kunye nezihlalo
-I-WiFi yasimahla kwaye ikhawuleza kakhulu
- Iindawo zokupaka zasimahla ziphambi kwendlu
Yindlu yonke. Ukhuseleko lweendwendwe luqinisekisiwe njengoko kungekho magumbi aqhelekileyo endlwini. Izitshixo zinikezelwe kwaye zibuyiselwe ngaphandle koqhagamshelwano ngebhokisi yezitshixo.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
Indawo yokubhaka yelali emnandi inokufikelelwa ngemizuzu nje embalwa ngeenyawo. Ibekwe kanye phakathi kwe-maypole yesiko emhlophe kunye neblue kunye necawa yaseLauterbach entle. Eyona nto ibalaseleyo (kubantu abancinci nabadala) ngumjelo welali kunye namantshontsho amadada omlingo. Ilali entle apho uthanda ukuba nemvakalelo ngokungathi ixesha limile ngomlingo.
Ukuba unomdla, wamkelekile ukuba uthathe inxaxheba kwizifundo zokucula okanye iindibano zocweyo kunye nomnini uSilvia Zelger (imvumi kunye nomqeqeshi wamazwi). Ungafumana ulwazi oluthe vetshe koku kwiphepha lasekhaya singscool.de